Kôliflower sy salady karaoty miaraka amin'ny paoma | Recipe ao an-dakozia
Kaoliflower sy salady karaoty miaraka amin'ny paoma
Maria vazquez | 12/06/2021 10:00 | Salady, Starters mangatsiaka
Sasatry ny salady rosiana nentim-paharazana? Ao an-trano dia tianay izany, fa mamorona kinova hafa tahaka ity ihany koa Kaoliflower sy salady karaoty miaraka amin'ny paoma. Nanomana azy io izahay ny faran'ny herinandro lasa teo ary tianay be izany ka zaraiko aminao anio. Sahinao ve ny manandrana azy?
Ity salady rosiana ity dia maivana sy mamelombelona. Ny ampahibola no tena mampiditra azy, na dia misy tongolo, karaoty, paoma ary Sipa kely sasany! Raha mamaky tsara ianao, akoho vavy. Ireo, ankoatry ny fanomezana tsy fitoviana amin'ny salady dia ataovy feno kokoa.
Ny salady dia azo asiana menaka sy vinaingitra, na izany aza dia aleoko nasiana mayonnaise tamin'ity indray mitoraka ity. Izany no mahatonga azy io ho mety manomana sandwich sy sandwich, fa koa ho fanarahana ny sakafon-kena na trondro. Tsy haharitra 15 minitra intsony ny fanomanana anao, nampanantena!
Ity salady kôliflower sy carrot miaraka amin'ny paoma ity dia mety indrindra ho famenoana sandwich, fa koa ho fanarahana ny hena na lovia trondro.
Fotoana hiketrehana: 6 M
Fotoana manontolo: 21 M
½ kavina lehibe
Tavoahangy kely 1 nahandro (200g.)
Karaoty 3, grated
Sintona 1, voatetika
2-3 sotro fihinana mayonnaise
Ao anaty vilany misy rano be mahandro ny ampongotso amin'ny florets izahay 6 minitra na mandra-pahalemem-panahy.
Raha, manasa sifotra izahay ambanin'ny riaky ny rano mangatsiaka.
Rehefa voasasa isika dia apetratsika ao anaty lovia ary notetehintsika tamin'ny tsorakazo izy ireo. Tsy mila manadio azy ireo isika, tsy maintsy ho sombin-javatra izy ireo ary mety misy akorandy iray manontolo mihitsy aza.
Avy eo, ampio ny karaoty voakiky ary ny tongolobe, iray amin'ny paoma ary ny ampongabongo voatetika.
Fotoana sy afangaro tsara daholo ny fangaro.
dia ampio ny mayonnaise ary mifangaro indray izahay.
Manolotra ny salady kolisy sy karaoty voaravaka paoma faharoa izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: firosoana » vilia » Salady » Kaoliflower sy salady karaoty miaraka amin'ny paoma
Cauliflower sy curry cream
Flan sôkôla tsy manendy